Adeegga been-soo-saarka birta - OUZHAN GANACSIGA (SHANGHAI) CO., LTD
Sheet processing processing Service-OEM Shiinaha Sheet Qaybo bir saaraha
Thanks to 10 injineero khibrad leh iyo in kabadan 30 nooc oo qalab casri ah, Ouzhan wuxuu kufiican yahay ogaanshaha sida warshadaha birta loo isticmaalo mudo 15 sano ah. Ouzhan waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u hagaajiso nashqadeynta alaabtaada iyada oo loo marayo DFM waxayna hubineysaa in qaybahaaga birta ah ee birta ah loo soo saari karo si sax ah, waxtar leh, iyo tayo u dhiganta tilmaamahaaga. Waxaan si xoogan u aaminsanahay sameynta jig tayo leh ee alxanka si loo fududeeyo kontaroolada hawsha. Barnaamijkeena 'ERP' wuxuu noo suurta geliyaa in aan maareyno wax soo saarka guriga dhexdiisa ee alaabooyinka la dhammeeyay ee leh SKUs badan.
Alaabtayada ugu adag ee la soo saaray ilaa maanta waxay ka kooban tahay 320 qaybood. Waxaan leenahay awoodo adag oo aan ku soosaari karno qaybo adag oo saxan oo saxan. Nidaamkeena afarta ah ee isku imaatinku waxay awood u leeyihiin inay taageeraan geedi socodka labaad iyo dhammeystirka sida alxanka, riveting, dahaarka budada, anodizing, iyo shirarka. Waxaan sidoo kale awoodnaa inaan bixinno adeeg hoosaad hoosaad ama aan gaarsiino alaab dhameystiran.
Ouzhan Awood Sheegida Birta Sheet
OuZhan waxay awood u leedahay inay bixiso adeegyo macmacaan ah oo tayo sare leh oo qiimo jaban iyo alaab tayo sare leh oo loogu talagalay mashaariicda tirada badan.
- Xirfad xirfadaysan adeegyo been abuur ah oo loogu talagalay amarro dhexdhexaad ah ama heer sare ah.
- Baaxad ballaaran oo ka mid ah qalabka biraha ikhtiyaariga ah.
- Baaxad ballaaran oo dhumucda mashiinka laga sameyn karo (0.5mm-20mm).
- Qalab badan oo qalab casri ah iyo nidaam kontaroolo sareeya.
- Tiknoolajiyad farsamo oo kala duwan oo farsamaysan.
Maxay Tahay Sababta Loo Doorto Adeegyada Been Abuurista Xaashida Ouzhan
• Laser Goynta CO2 iyo N2
• Xaashida CNC Xaalladda 4 & 6 dhidibka
• TIG, MIG, Shaabbad
• Alxanka Robot (ABB Robot 1410 oo leh Nidaamka Alxanka Fronius)
• Jig-ga Custom-Made
• Qoynta alxanka
2. Awoodda Nidaamka Dugsiga Sare ee Badan
Marka lagu daro mashiinka biraha, waxaan ku takhasusay TIG iyo MIG, Robot Alxanka, Alxanka Spot, Laabista CNC Sheet, Riveting, PEM, Laser Etching, iwm Marka waxaad ka heli kartaa xulasho ballaaran oo ka mid ah qaybaha birta kooxdayada aan ku kalsoon nahay.
Waxaan haynaa 10 injineer oo ku sugan xarunteena R&D, dhamaantood waa dhakhaatiir ama macalimiin ka socda Jaamacada Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha. Waxaan soo bandhigi karnaa naqshadeynta birta ugu xirfadda badan iyo adeegyada wax soo saarka birta.
Waxaan haynaa shaqaale kormeer tayo leh iyo qalab, sida ku cad heerarka caalamiga ah ee alaabooyinkaaga si ay u tijaabiyaan, una soo saarno warbixin baaritaan oo faahfaahsan oo loogu talagalay macaamiisha 'qaybaha birta ah.
Cabirro iyo qaabab loo qaabeeyey ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto sawiradaada qaybahaaga birta ah, aan wada shaqeyno si aan nolosha uga dhigno mid hal abuur leh.
Waa maxay Birta xaashida shaqaysa & Sida loo sameeyo birta xaashida
Birta xaashidu ma aha shey gaar ah. Taabadalkeed, ereyga waxaa loo adeegsadaa biraha loo sameeyay qaab ahaan. Sida caadiga ah, birta xaashida ahi waxay leedahay qaab afar gees ah. Sidoo kale waa astaamo in dhumucda xaashidu ay si aad ah uga hooseyso tan dhererkeeda iyo ballacdeeda.
Marka lagu daro birta, biro kale oo badan sida naxaas, aluminium iyo dahab iyo sidoo kale aalado naxaas ah ayaa lagu baaraandegi karaa birta xaashida ah. Si looga baaraandego birta xaashida ah, si kastaba ha noqotee, walxaha la isticmaalay waa inay lahaadaan astaamo gaar ah, tusaale ahaan adkaansho iyo qallafsanaan, iyo dabcan noqo ductile, ie formable. Shuruudahaan waxay keeneysaa xayiraad la xiriirta qalabka la isticmaali karo. Sidaa darteed, suurtagal maahan in lagu farsameeyo qalab aad u jajaban ama aad u adag oo loo geliyo birta xaashida ah.
Marka tan la eego, birta xaashida ahi waa shey gebi ahaanba dhammaaday oo lagu soo saari karo aag ballaaran, halkaas oo ay xaashiyaha guud ahaan yihiin kuwo khafiif ah, dhuuban, xasilloon, laastiik ah oo fidsan. Sababahan gaarka ah awgood, waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada xirashada iyo dedidda. Intaas waxaa sii dheer, birta xaashiyaha waxaa loo beddeli karaa siyaabo badan, yacni waa la alxan karaa, laabi karaa, la feeri karaa ama la jari karaa. Noocyo badan oo kala duwan ayaa laga samayn karaa birta xaashida ah, waana sababta loo adeegsanayo inay tahay bilowga alaabooyin kala duwan.
Ereyga "processing sheet sheet" wuxuu daboolayaa tiro badan oo ka mid ah hababka wax soo saarka. Asal ahaan, erayga xaashida xaashida shaqaysa waxaa loola jeedaa soo saarista alaabada, qaybaha iyo qaybo ka sameysan bir. Ka sokow alxanka, goynta iyo foorarsiga, hababka wax soo saarka birta xaashida waxaa sidoo kale ku jira feer, sameysmo, duubis iyo ku biirid. Sameynta birta xaashida badanaa waxaa sidoo kale lagu daraa farsameynta birta xaashida ah, oo leh qaybaha hoose ee soo socda:
• Dhismaha birta
• Lakab sameynta
• Gariiradda kuleylka
• Laabista foorarsiga
• Goynta leysarka
Qaab dhismeedka xaashida birta ah, ayaa la soo saari karaa xaashiyo jilicsan iyo kuwa adkaysi lehba, taas oo sifooyinka kala duwan lagu gaadho waxyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa jira curiyeyaal badan oo lagu dari karo birta ku jirta xaaladda dareeraha inta lagu jiro shaqada birta oo go'aamisa astaamaha maaddada birta xaashida ah ee la soo saaray. Silicon, nickel iyo chromium ka sokow, waxyaabahan waxaa kale oo ka mid ah titanium, copper, niobium iyo molybdenum.
Waxyaabaha lagu farsameeyo birta xaashida - Qalabka loo isticmaalo Mashiinka Birta
Qalabka loo heli karo xaashida birta
• Nadiifinta Birta Qabow (CRS, SAPH440)
• Bir Diidan kulul (HRS)
• Ahama ahama (SS304, SS316, SS301)
• Xaashida Naxaas
Xaashida Ouzhan Sheetka Birta Dusha Dhamaadkiisa
Halkan waxaa ku yaal xulasho ballaaran oo ah adeegyo dhammaystiran dusha sare ee biraha aad dooratay oo loogu talagalay qaybaha birta birta ah si loo hagaajiyo muuqaalka qaybaha, jilicsanaanta dusha sare, caabbinta daxalka, iyo astaamaha kale: